ထိုင်ဝမ်ဆန် ထိုင်ဝမ်ဆန် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် Taiwanအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသူကို ထိုင်ဝမ်ဆန်ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မား, စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့။ သင်၌စိတ်ဝင်စားကြကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး ထိုင်ဝမ်ဆန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ထိုင်ဝမ်ဆန် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ထိုင်ဝမ်ဆန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
စစ်မှန်သော Chishang ဆန် စစ်မှန်သော Chishang ဆန်ထုတ်လုပ်မှုareaရိယာသည်ဝမ်တွင်တည်ရှိသည်’စပါးစိုက်areaရိယာ.ဝမ်’စပါးisရိယာသည် Xinwulu မြစ်မှရေလောင်းသောရွှံ့မြေဖြစ်သည်.၎င်းသည် Chishang ဆန်၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်.နာမည်ကြီးဘရောင်းရိပ်သာလမ်း,Tiantang လမ်းနှင့် Jincheng Wushu သည်ထုတ်လုပ်မှုideရိယာ၏ဘေးတွင်ရှိသည်. . ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Chishang ဆန်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်ကိုအောက်ပါအချက်များကဖော်ပြသည်: ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၃၀၀ အမြင့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်,နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောအပူချိန်ခြားနားချက်နှင့်အတူ,လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်.ရှည်လျားသောကြီးထွားမှုကာလသည်ဆန်အတွက်လုံလောက်သောအနားယူမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုအချိန်ကိုပေးနိုင်သည်.ဆန်အရည်အသွေးသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,အော်ဂဲနစ်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောရေသန့်သည် Xinwulu မြစ်မှတိုက်ရိုက်ရေပေးသည်,မြေဆီသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်. မြေဆီလွှာ၏သဘောသဘာဝသည်မြေကြီးနှင့်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်-ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာ,အရာစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်,ပြီးတော့မြို့နယ်ထဲမှာညစ်ညမ်းစက်ရုံတွေမရှိဘူး,စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှမြေဆီလွှာကိုကာကွယ်နိုင်သည်. လယ်သမားများသည်ပြန်လည်ရရှိသည်-ပညာရေးအတွေ့အကြုံ,စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များတိုးတက်စေရန်သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူ,ဆန်အရည်အသွေးလည်းတိုးတက်လာသည်. အမျိုးမျိုး:ခိုင်စင် No.၁၃၉(Chishang ဆန်)အရည်အသွေးလက်မှတ်:CAS အရည်အသွေးအရည်အသွေးဆန်အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုအမှတ်အသားအမှတ်.042101အဆင့်:အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားအဆင့်စံ CNS ပထမတန်းစားထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:၁.၈ ကီလိုဂရမ်/အိတ်,၁၀ အိတ်/ပုံးမူလနေရာ:Chishang,ung,ထိုင်ဝမ်,Xinwuluxi ဆည်မြောင်းခရိုင်,Chishang Township Office နှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်စတစ်ကာများ,၁၀၀%Chishang ဒေသခံဆန်
Chishang Taro ဆန် Taoyuan အမှတ်.၃ မွှေးသောဆန်-ဆန်စေ့၏အသွင်အပြင်နှင့်အရသာကောင်းမွန်သည်,နှင့်4လအပူချိန်နိမ့်သိုလှောင်ပြီးနောက်အနံ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်,အညိုဆန်သို့ချက်ပြုတ်သည့်အခါပင်.Taoyuan အမှတ်.၃ မွှေးသောဆန်သည်သဘာဝ taro ရနံ့ရှိသည်,နှင့်၎င်း၏ချိုသာမန်ဆန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.သင်ချက်ပြုတ်သည့်ဆန်၏အဖုံးကိုဖွင့်တိုင်း,သငျသညျအခန်း၏အမွှေးအကြိုင်အနံ့နိုင်ပါတယ်.၎င်းသည်လူကြိုက်များသော Ikegami တစ်ခုဖြစ်သည်.Chishang taro ဆန်ထုတ်လုပ်မှုareaရိယာသည်ဝမ်တွင်တည်ရှိသည်’စပါးစိုက်areaရိယာ.ဝမ်’စပါးisရိယာသည် Xinwulu မြစ်မှရေလောင်းသောရွှံ့မြေဖြစ်သည်.၎င်းသည် Chishang ဆန်၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်.နာမည်ကြီးဘရောင်းရိပ်သာလမ်း,Tiantang လမ်းနှင့် Jincheng Wushu သည်ထုတ်လုပ်မှုideရိယာ၏ဘေးတွင်ရှိသည်. . ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Chishang ဆန်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်ကိုအောက်ပါအချက်များကဖော်ပြသည်: ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၃၀၀ အမြင့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်,နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောအပူချိန်ခြားနားချက်နှင့်အတူ,လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်.ရှည်လျားသောကြီးထွားမှုကာလသည်ဆန်အတွက်လုံလောက်သောအနားယူမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုအချိန်ကိုပေးနိုင်သည်.ဆန်အရည်အသွေးသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,အော်ဂဲနစ်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောရေသန့်သည် Xinwulu မြစ်မှတိုက်ရိုက်ရေပေးသည်,မြေဆီသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်. မြေဆီလွှာ၏သဘောသဘာဝသည်မြေကြီးနှင့်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်-ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာ,အရာစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်,ပြီးတော့မြို့နယ်ထဲမှာညစ်ညမ်းစက်ရုံတွေမရှိဘူး,စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှမြေဆီလွှာကိုကာကွယ်နိုင်သည်. လယ်သမားများသည်ပြန်လည်ရရှိသည်-ပညာရေးအတွေ့အကြုံ,စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များတိုးတက်စေရန်သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူ,ဆန်အရည်အသွေးလည်းတိုးတက်လာသည်. အမျိုးမျိုး:Taoyuan အမှတ်.၃ မွှေးသောဆန်(Chishang ဆန်)အရည်အသွေးလက်မှတ်:CAS အရည်အသွေးအရည်အသွေးဆန်အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုအမှတ်အသားအမှတ်.042103အဆင့်:အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားအဆင့်စံ CNS ပထမတန်းစားထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:၁.၈ ကီလိုဂရမ်/အိတ်,၁၀ အိတ်/ပုံးမူလနေရာ:Chishang,ung,ထိုင်ဝမ်,Xinwuluxi ဆည်မြောင်းခရိုင်,Chishang Township Office နှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်စတစ်ကာများ,၁၀၀%Chishang ဒေသခံဆန်
Chihshang ပရီမီယံဘရောင်းဆန် ဆန်ဖယ်ရှားပြီးနောက်,ဒါကအညိုဆန်ဖြစ်လာသည်.ဆန်ဘရန်ဆန်ဆန်၏အပြင်ဘက်တွင်အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတစ်ခုရှိသည်;ဆန်ဖွဲနုများနှင့်အညိုရောင်ဆန်စပါးပေါက်များသည်ဗီတာမင် B မိသားစုနှင့်ဗီတာမင်အီးပေါကြွယ်ဝသည်.သူတို့ထဲတွင်,ပိုတက်စီယမ်ရဲ့ contents,မဂ္ဂနီစီယမ်,သွပ်,သံ,မန်းဂနိစ်နှင့်အခြားသဲလွန်စဒြပ်စင်သည်ဆန်ဖြူထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.အစားအသောက်ဖိုင်ဘာတွေအများကြီး. ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Chishang ဆန်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်ကိုအောက်ပါအချက်များကဖော်ပြသည်: ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၃၀၀ အမြင့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်,နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောအပူချိန်ခြားနားချက်နှင့်အတူ,လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်.ရှည်လျားသောကြီးထွားမှုကာလသည်ဆန်အတွက်လုံလောက်သောအနားယူမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုအချိန်ကိုပေးနိုင်သည်.ဆန်အရည်အသွေးသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,အော်ဂဲနစ်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောရေသန့်သည် Xinwulu မြစ်မှတိုက်ရိုက်ရေပေးသည်,မြေဆီသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်. မြေဆီလွှာ၏သဘောသဘာဝသည်မြေကြီးနှင့်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်-ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာ,အရာစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်,ပြီးတော့မြို့နယ်ထဲမှာညစ်ညမ်းစက်ရုံတွေမရှိဘူး,စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှမြေဆီလွှာကိုကာကွယ်နိုင်သည်. လယ်သမားများသည်ပြန်လည်ရရှိသည်-ပညာရေးအတွေ့အကြုံ,စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များတိုးတက်စေရန်သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူ,ဆန်အရည်အသွေးလည်းတိုးတက်လာသည်. အမျိုးမျိုး:ခိုင်စင် No.၁၃၉(Chishang ဆန်)အဆင့်:အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားအဆင့်စံ CNS ပထမတန်းစားထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:၁.၈ ကီလိုဂရမ်/အိတ်,၁၀ အိတ်/ပုံးမူလနေရာ:Chishang,ung,ထိုင်ဝမ်,Xinwuluxi ဆည်မြောင်းခရိုင်,Chishang Township Office နှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်စတစ်ကာများ,၁၀၀%Chishang ဒေသခံဆန်
Chishang ဆန် 1 ကီလိုဂရမ် ၁ ကီလိုဂရမ် Chishang Fa Cai ဆန်ထုပ်တွင် Q ၏ကြွယ်ဝမှု၏ဘုရားသခင်ပုံစံဖြစ်သည်,လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Chishang ဆန်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်ကိုအောက်ပါအချက်များကဖော်ပြသည်: ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၃၀၀ အမြင့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်,နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောအပူချိန်ခြားနားချက်နှင့်အတူ,လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်.ရှည်လျားသောကြီးထွားမှုကာလသည်ဆန်အတွက်လုံလောက်သောအနားယူမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုအချိန်ကိုပေးနိုင်သည်.ဆန်အရည်အသွေးသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,အော်ဂဲနစ်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောရေသန့်သည် Xinwulu မြစ်မှတိုက်ရိုက်ရေပေးသည်,မြေဆီသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်. မြေဆီလွှာ၏သဘောသဘာဝသည်မြေကြီးနှင့်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်-ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာ,အရာစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်,ပြီးတော့မြို့နယ်ထဲမှာညစ်ညမ်းစက်ရုံတွေမရှိဘူး,စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှမြေဆီလွှာကိုကာကွယ်နိုင်သည်. လယ်သမားများသည်ပြန်လည်ရရှိသည်-ပညာရေးအတွေ့အကြုံ,စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များတိုးတက်စေရန်သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူ,ဆန်အရည်အသွေးလည်းတိုးတက်လာသည်. မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း: ”Genius သည်အရည်အချင်းတစ်ခုအပေါင်းနှင့် ၉၉ မှတ်ကြိုးစားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်.”Chihshang မြို့နယ်သည်သဘာဝဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရန်နှင့်ထိုင်ဝမ်၏ပံ့ပိုးမှုရှိသော်လည်း’ဆန်မျိုးကောင်းများ,လယ်သမားများဖြစ်သည်’ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းတွင်မြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၎င်းသည်ဆန်အရည်အသွေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထိန်းသိမ်းထားရန်ခွင့်ပြုသည့်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်,ထို့ကြောင့် Chishang မြို့နယ်၌စိုက်သောဆန်သည်နှစ်စဉ် Huadong Rift ဆန်ပြိုင်ပွဲတွင်ဆုများရရှိမည်ဖြစ်သည်. အမျိုးမျိုး:Japonica ဆန်(သန့်ရှင်းသော Chishang ဆန်)အဆင့်:CNS ဒုတိယလူတန်းစားထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:1 ကီလိုဂရမ်/အိတ်,အိတ် ၁၈ လုံး/ပုံးမူလနေရာ:Chishang,ung,ထိုင်ဝမ်,Xinwuluxi ဆည်မြောင်းခရိုင်,Chishang Township Office နှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်စတစ်ကာများ,၁၀၀%Chishang ဒေသခံဆန်
Chishang ဆန် 1.5 ကီလိုဂရမ် Chishang Fa Cai ဆန်တွင်ထုပ်ပိုးထားသောအရာသည်ဘုရားသခင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပုံစံဖြစ်သည်,၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းသောအနီရောင်ထုပ်ပိုးမှုကိုအသုံးပြုသည်,အရာလက်ဆောင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုများအတွက်သင့်လျော်သည်.Chishang ဆန်ထုတ်လုပ်မှုareaရိယာသည်ဝမ်တွင်တည်ရှိသည်’စပါးစိုက်areaရိယာ.ဝမ်’စပါးisရိယာသည် Xinwulu မြစ်မှရေလောင်းသောရွှံ့မြေဖြစ်သည်.၎င်းသည် Chishang ဆန်၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်.နာမည်ကြီးဘရောင်းရိပ်သာလမ်း,Tiantang လမ်းနှင့် Jincheng Wushu သည်ထုတ်လုပ်မှုideရိယာ၏ဘေးတွင်ရှိသည်. . ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Chishang ဆန်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်ကိုအောက်ပါအချက်များကဖော်ပြသည်: ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၃၀၀ အမြင့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်,နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောအပူချိန်ခြားနားချက်နှင့်အတူ,လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်.ရှည်လျားသောကြီးထွားမှုကာလသည်ဆန်အတွက်လုံလောက်သောအနားယူမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုအချိန်ကိုပေးနိုင်သည်.ဆန်အရည်အသွေးသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,အော်ဂဲနစ်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောရေသန့်သည် Xinwulu မြစ်မှတိုက်ရိုက်ရေပေးသည်,မြေဆီသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်. မြေဆီလွှာ၏သဘောသဘာဝသည်မြေကြီးနှင့်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည်-ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာ,အရာစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်,ပြီးတော့မြို့နယ်ထဲမှာညစ်ညမ်းစက်ရုံတွေမရှိဘူး,စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှမြေဆီလွှာကိုကာကွယ်နိုင်သည်. လယ်သမားများသည်ပြန်လည်ရရှိသည်-ပညာရေးအတွေ့အကြုံ,စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များတိုးတက်စေရန်သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူ,ဆန်အရည်အသွေးလည်းတိုးတက်လာသည်. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေအရည်အသွေးအပြင်,Chishang မြို့နယ်သည်အမြင့် ၂၅၀ မှ ၂၉၃ မီတာအမြင့်တွင်ရှိသည်,ထို့ကြောင့်နေ့နှင့်ညအကြားအပူချိန်ကွာခြားမှုသည်ကြီးမားသည်.ဤတွင်စိုက်ပျိုးသောစပါးသည်ကာလရှည်ကြာစွာစိုက်ပျိုးခဲ့သည်,နှင့်ဆန်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ပါတယ်.သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများပေါင်းစပ်နှင့်အတူ,Chishang မြိ့ုနယ်သည်အခြားတိုင်းပြည်များနှင့်မြို့များနှင့်တူညီသောဆန်စပါးကိုစိုက်ပျိုးလျှင်ပင်,ထုတ်လုပ်သောဆန်၏အရည်အသွေးသည်အထူးကောင်းမွန်သည်,နှင့်အရသာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့ကြီးထွားလာပတ်ဝန်းကျင်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အတူဒွန်တွဲ,Chishang မြို့နယ်ကိုဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေပါ,နှင့်ဆန်စိုက်ပျိုးမှုအရည်အသွေးကိုသဘာဝကျကျထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. အမျိုးမျိုး:Japonica ဆန်(သန့်ရှင်းသော Chishang ဆန်)အဆင့်:CNS ဒုတိယလူတန်းစားထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:၁.၅ ကီလိုဂရမ်/အိတ်,အိတ် ၁၂ လုံး/ပုံးမူလနေရာ:Chishang,ung,ထိုင်ဝမ်,Xinwuluxi ဆည်မြောင်းခရိုင်,Chishang Township Office နှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်စတစ်ကာများ,၁၀၀%Chishang ဒေသခံဆန်
ဆန် 300 ဂရမ်
ထိုင်ဝမ်ဆန်-300 ဂရမ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပုံစံ,သီးသန့်ထုတ်ကုန်Fa Cai ဆန်လက်ဆောင်များ The ည့်သည်တွေအရမ်းပျော်တယ်.လက်ဆောင်များ,အမှတ်တရပစ္စည်းများ,ဆိုင်လည်ပတ်မှု,လည်ပတ်မှု,ကုမ္ပဏီလှုပ်ရှားမှုများ,ကလပ်လှုပ်ရှားမှုများ,နှင့်အသင်းဝင်လက်ဆောင်တွေအားလုံးသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်ဒီထုတ်ကုန်မြင့်ထုတ်လုပ်သည်-အရည်အသွေးကောင်းစပါးစိုက်areaရိယာ,Wushantou ဆည်မြောင်းဝှမ်း၏အရင်းအမြစ်မှာတည်ရှိပါတယ်,ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆွဲနိုင်ပါတယ်-Wushantou ရေလှောင်ကန်၏အခမဲ့ရေအရင်းအမြစ်,အများဆုံး viscous cyanine မြေဆီလွှာ,စိုက် rice ည့်စပါးသည်စေးကပ်သော်လည်းသေးသည်. ”Jingpu”အကောင်းဆုံးဆန်တစ်ခုဖြစ်သည်-Liujia မြို့နယ်ရှိဒေသများထုတ်လုပ်ခြင်း.၎င်းကိုရှေးခေတ်တွင် Linfengying ဟုခေါ်သည်”Kuigang”နှင့်”Zhongshe” .၎င်းတွင်သန့်စင်ပြီးညစ်ညမ်းမှုရှိသည်-အခမဲ့မြေဆီလွှာနှင့်ရေ.မွေးမြူထားသောဆန်သည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းမာသည်. .အမျိုးမျိုး:Tainan အမှတ်.၁၁အရည်အသွေးလက်မှတ်:အရည်အသွေးကောင်းဆန်အတွက် CAS အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဆင့်:အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားအဆင့်စံ CNS ပထမထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:300 ဂ/အိတ်မူလနေရာ:Tainan Liujia
ထိုင်ဝမ်ဆန်-1 ကီလိုဂရမ် ကံဇာတာနှင့်ဘဏ္andာငွေ ကျေးဇူးပြု၍ Fa Cai ဆန်ကိုလက်ဆောင်များအတွက်အသုံးပြုပါ.နုတ်ဆက်ပါတယ်-နုတ်ဆက်ပါတယ်,ကျေးဇူးပြုပြီးကြွယ်ဝသောဆန်ကိုသုံးပါ.ဘုရားများကိုကိုးကွယ်ရန်နှင့်ဘိုးဘေးကိုးကွယ်ရန်,ကျေးဇူးပြုပြီးကြွယ်ဝသောဆန်ကိုသုံးပါ.နေ့တိုင်းကံဇာတာတစ်ခုပြုလုပ်ပါ.ဒီထုတ်ကုန်မြင့်ထုတ်လုပ်သည်-အရည်အသွေးကောင်းစပါးစိုက်areaရိယာ,Wushantou ဆည်မြောင်းဝှမ်း၏အရင်းအမြစ်မှာတည်ရှိပါတယ်,ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆွဲနိုင်ပါတယ်-Wushantou ရေလှောင်ကန်၏အခမဲ့ရေအရင်းအမြစ်,အများဆုံး viscous cyanine မြေဆီလွှာ,စိုက် rice ည့်စပါးသည်စေးကပ်သော်လည်းသေးသည်. ”Jingpu”အကောင်းဆုံးဆန်တစ်ခုဖြစ်သည်-Liujia မြို့နယ်ရှိဒေသများထုတ်လုပ်ခြင်း.၎င်းကိုရှေးခေတ်တွင် Linfengying ဟုခေါ်သည်”Kuigang”နှင့်”Zhongshe” .၎င်းတွင်သန့်စင်ပြီးညစ်ညမ်းမှုရှိသည်-အခမဲ့မြေဆီလွှာနှင့်ရေ.မွေးမြူထားသောဆန်သည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းမာသည်. .အမျိုးမျိုး:Tainan အမှတ်.၁၁အရည်အသွေးလက်မှတ်:အရည်အသွေးကောင်းဆန်အတွက် CAS အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဆင့်:အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားအဆင့်စံ CNS ပထမထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:1 ကီလိုဂရမ်/အိတ်မူလနေရာ:Tainan Liujia
ထိုင်ဝမ်ဆန်-1.၈ ကီလိုဂရမ် ဤထုတ်ကုန်ကို CAS ဆန်စီမံကိန်းမှအသိအမှတ်ပြုစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သည်,နှင့်သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည်.CAS ဆန်အစီအစဉ်ကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသောထုတ်လုပ်သူများသည်စက်ရုံလည်ပတ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် CAS ဆန်မှအသိအမှတ်ပြုထားသောပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအကဲဖြတ်စံနှုန်းများကိုကျော်ဖြတ်ရမည်.စံချိန်စံညွှန်းများစက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်ပါဝင်သည်,စက်ရုံဂိုဒေါင်အဆောက်အ,စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ,အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ,အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု,တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု,စသည်တို့.ခြောက်ပစ္စည်းများ.ဒီထုတ်ကုန်မြင့်ထုတ်လုပ်သည်-အရည်အသွေးကောင်းစပါးစိုက်areaရိယာ,Wushantou ဆည်မြောင်းဝှမ်း၏အရင်းအမြစ်မှာတည်ရှိပါတယ်,ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဆွဲနိုင်ပါတယ်-Wushantou ရေလှောင်ကန်၏အခမဲ့ရေအရင်းအမြစ်,အများဆုံး viscous cyanine မြေဆီလွှာ,စိုက် rice ည့်စပါးသည်စေးကပ်သော်လည်းသေးသည်. ”Jingpu”အကောင်းဆုံးဆန်တစ်ခုဖြစ်သည်-Liujia မြို့နယ်ရှိဒေသများထုတ်လုပ်ခြင်း.၎င်းကိုရှေးခေတ်တွင် Linfengying ဟုခေါ်သည်”Kuigang”နှင့်”Zhongshe” .၎င်းတွင်သန့်စင်ပြီးညစ်ညမ်းမှုရှိသည်-အခမဲ့မြေဆီလွှာနှင့်ရေ.မွေးမြူထားသောဆန်သည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကျန်းမာသည်. .အမျိုးမျိုး:Tainan အမှတ်.၁၁အရည်အသွေးလက်မှတ်:အရည်အသွေးကောင်းဆန်အတွက် CAS အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဆင့်:အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားအဆင့်စံ CNS ပထမထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:၁.၈ ကီလိုဂရမ်/အိတ်မူလနေရာ:Tainan Liujia